Nkwado - Beijing Convista Flow Control Equipment Co., Ltd.
CONVISTA ọ bụghị naanị na-enye ndụmọdụ ndụmọdụ maka usoro nchịkwa ihe nchịkwa na nke mbụ, yana na-arụkwa ọrụ nyocha ọkachamara maka ọrụ niile.
Na maka ọrụ, ọrụ CONVISTA Field engineering service team nwere ike inye azịza nke oge maka mkpa ndị ahịa n'ụwa niile: ịgba akaebe na nkwado teknụzụ na inye ọrụ & ịmalite usoro, mmezi mechie nlekọta, nchọpụta nsogbu na ịrụzi ọrụ, nhọrọ akụrụngwa, mmezi na ọzụzụ ọrụ.
1．Mkpebi ndị a ga-enye
Ihe mgbaru ọsọ kasịnụ nke CONVISTA bụ ịnye usoro nchịkwa dị iche iche a na-ahụ maka ọrụ dị iche iche maka ihe dị iche iche chọrọ.
Step1: Otu ndi oru injinia anyi, na mbu, ga-enyocha oru nke oru a nke oma, ihe omuma ya na ihe ndi ozo, si otú a weputa nyocha kwesiri;
Step2: commerciallọ ọrụ azụmahịa anyị ga-enyocha ihe ndị ahịa chọrọ & nke azụmahịa ma zaghachi ya na onye isi njikwa ahịa;
Step3: Dabere na data ndị dị n'elu, ndị injinia anyị ga-ahọrọ ụdị kwesịrị ekwesị, ihe ziri ezi, ọrụ ọrụ ziri ezi & ndị na-eme ihe kwekọrọ na ọrụ ndị a chọrọ, yana, maka uru onye ahịa, ịchekwa ego ga-abụkwa otu n'ime echiche ha.
Step4: Ndị otu azụmaahịa ga-arụ ọrụ kacha mma, zigara Nkwupụta Nzuzo & Nkwupụta azụmaahịa ndị ahịa site na E-mail.
2．nke na-emesi obi ike na njikwa
Factlọ ọrụ niile enyere ikike na CONVISTA ọ bụghị naanị ga-ejide nnabata niile dị mkpa, gụnyere ISO9001, API 6D, API 6A, CE / PED, HSE, API 607 ​​/ API 6Fa Fire Safe certificate,
kamakwa, aghaghi inwe usoro nchịkwa gwụchara site na ihe ọkụkụ ruo na ngwaahịa. Thelọ ọrụ ahụ's Internal Quality Control Personnel & Facility ga-abụ nke ruru eru iji mezuo ule eserese Radio, Ultra-sonic test, Dye Penetrate, Magnetik particles, Positive Material Identifier (PMI), Mmetụta ule, Nnwale ule, ike ike ule, Fire Nchekwa Test , Cryogenic ule, agụụ ule, Low igbapu emission ule, elu nsogbu gas ule, High okpomọkụ ule na Hydro-static ule.
3． nyocha, mmepe na ihe ohuru
CONVISTA nwere nnukwu ọrụ na imewe valvụ, yana sistemụ CAD / CAM (Solid Works) sistemụ zuru oke na-eji ohere niile maka teknụzụ injinịa ọhụrụ na asọmpi ebe ị hụrụ nrube isi n'iwu niile dị mkpa.
CONVISTA abụwo ihe pụtara ìhè na ịmepụta atụmatụ ọhụrụ nke nnukwu valves maka nrụgide dị elu na ọrụ okpomọkụ, Cryogenic valves Corrosion na-eguzogide ọgwụ na ngwaahịa na-arụ ọrụ pụrụ iche maka ọrụ ụfọdụ.